प्रायः सोधिने प्रश्न - क़िंगदाओ जुन्रे इंटेलिजेंट इन्स्ट्रुमेन्ट कं, लिमिटेड
ZR-1000 ब्याक्टेरिया फिल्टरेशन दक्षता परीक्षकको आवश्यक गुणस्तर नियन्त्रण मूल्यको लागि के कारण कारण मानक सीमा (2200 ± 500 CFU) लाई पालना गर्दैन?
(१) ब्याक्टेरिया निलम्बनले राष्ट्रिय स्तरको आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन।
(२) पेरिस्टेटिक पम्पको प्रवाह दर इष्टतम होइन, प्रवाह दर बढाउन वा घटाउने प्रयास गर्नुहोस्।
()) पेट्री डिशको आकार जाँच गर्नुहोस् (विशेष गरी गिलास भाँडा)।
ZR-1000 ब्याक्टेरिया फिल्टरेशन दक्षता परीक्षक द्वारा नमूना पछाडि अन्य ब्याक्टेरियाहरू बढ्नको कारण के हो?
（१） पाइपलाइन चुहावट भइरहेको छ, गिलासमा सिलिकॉन जडान गर्ने पाइप चुहाइरहेको छ कि छैन जाँच्नुहोस्।
（२ the संस्कृति माध्यम तयार गर्दा वातावरण एसेप्टिक हुँदैन।
Environment） work कार्य वातावरण कठोर छ वा HEPA फिल्टर असफल हुन्छ।
।） Pet पेट्री डिशको आकार जाँच गर्नुहोस् (विशेष गरी गिलास भाँचे)
कसरी समस्या समाधान गर्ने कि ZR-1000 ब्याक्टेरिया फिल्टर प्रक्रिया दक्षता परीक्षक (BFE) बुट गर्न सक्दैन।
Button १ power पावर बटन थिचे पछि, रातो पावर बत्तीले काम गर्दैन, बत्ती र यूभी लाइटले पनि काम गर्दैन, पावर लाइन जडान भएको छ कि छैन र त्यहाँ विद्युत आपूर्ति छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, र पछाडि चुहावट सुरक्षा स्विच कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। उपकरणको खोलिएको छ।
Indic २） पावर सating्केत दिने प्रकाश सक्रिय छ, बत्ती र यूभी लाइटले पनि काम गर्दछ तर स्क्रिन कालो छ र मेशिन बुट गर्न सक्दैन, बिजुली आपूर्तिमा विच्छेदन गर्न सक्दछ, फेरि बुट अप गर्न सक्दछ र अगाडिको प्यानलमा रिसेट बटन छुराउँदछ।
A, B दुई पथ एन्डरसन नमूनाको समानान्तर समस्या ZR-1000 ब्याक्टेरिया फिल्टरेशन दक्षता परीक्षक (BFE) मा। A र B दुई पथको नमूना परिणाम फरक छ।
（१ A A र B को प्रवाह दर सुसंगत छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
Pip २） पाइपलाइन फुटेको छ कि छैन जाँच्नुहोस्, र पेट्री डिशको आकार उपयुक्त छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् (विशेष गरी गिलास पेट्री डिश, यदि पेट्री डिश अधिक छ भने, यसले माथिल्लो लेयर ज्याक गर्नेछ, जसले एन्डरसन नमूनाको कारण दिन्छ) लीक गर्न)।
And） जाँच गर्नुहोस् कि प्रत्येक एन्डरसन नमूनाको एपर्चर अवरुद्ध छ कि छैन (सरल परीक्षण विधि, दृश्य अवलोकन, यदि अवरुद्ध गरियो भने, यसलाई परीक्षण गर्नु अघि सफा गर्नुहोस्)।
ZR-1006 मास्क कण फिल्टर क्षमता र एयरफ्लो प्रतिरोध परीक्षकको फिल्टर क्षमताको विचलनसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
यो मानक नमूना प्रयोग गर्न सिफारिश गरिन्छ (जस्तै प्राधिकरण संगठनहरू द्वारा परीक्षण गरिएको नमूना) वा तुलनाको लागि एयरोसोल फिल्टरेशन दक्षता परीक्षण वक्रको साथ नियमित मानक फिल्टर। यदि विचलनलाई शंका गरियो भने, क्यालिब्रेसनको लागि योग्य नाप मापन एजेन्सीमा जान सिफारिस गरिन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टलाई दौडिको अवधि पछि मर्मतको आवश्यकता हुन्छ, जस्तै कार मर्मतसम्भार। मर्मतको दायरा भनेको सबै आन्तरिक र बाह्य पाइपलाइनहरू सफा गर्नु, फिल्टर तत्वहरू प्रतिस्थापन गर्नु, फिल्टरहरू सफा गर्नु र एरोसोल जेनेरेटर आदि सफा गर्नु हो।
ZR-1006 मास्क कण फिल्टर दक्षता र एयरफ्लो प्रतिरोध परीक्षक समय गणना गर्न र प्रारम्भिक नमूना पछाडि दौड्न सक्दैन।
पहिले, जाँच गर्नुहोस् कि नमूना प्रवाह प्रवाह मूल्यमा पुगेको छ (जस्तै L 85 एल / मिनेट), मेसिनले प्रवाह मानमा पुर्‍याउनु अघि नमूना सुरू गर्दैन (न त धेरै उच्च होस् न त कम)। तिनीहरू मध्ये धेरै प्रशंसक मोड्युलको फिल्टर कपासलाई प्रतिस्थापन गरेपछि समाधान गर्न सकिन्छ। पाइपलाइन अवरुद्ध छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, र मिक्सिंग कक्षको निकास भल्भ सामान्यतया खुला हुनुपर्छ।
यदि अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम प्रवाह १.० L / मिनेटमा पुगेन भने, फोटोमिटर मोड्युलको HEPA फिल्टर बदल्न आवश्यक छ। यसलाई प्रतिस्थापन गर्न र यसलाई कायम राख्न आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न प्रेशर मान जाँच गरेर निर्णय गरिन्छ (दबाव दायरा: नमूना प्रेशर> K केपीए, अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम दबाव> K केपीए)।
ZR-1006 मास्क पार्टिकुलेट फिल्टर दक्षता र एयरफ्लो प्रतिरोध परीक्षकको अपस्ट्रीम एयरोसोल एकाग्रताले लक्ष्य मूल्यमा पुग्न नसक्ने भए मैले के गर्नुपर्छ?
सम्भवतः सायद यो किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट सफाई र मर्मत आवश्यक छ। यो समस्या एरोसोल जेनरेटर, पाइपलाइन, मिक्सिंग चेंबर, फ्यान, र फोटोमीटर मोड्युललको नोजल सफा गरेर समाधान गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि नुन समाधान उपयुक्त छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्, नुन एरोसोल जेनरेटरमा गिलासको बोतलको पछाडि अन्तमा निकास भल्भ बन्द छ कि छैन। र जाँच गर्नुहोस् कि सबै दबावहरू सामान्य छन् (नुन ०.२4 MPa हो, तेल ०.०5-०. MP MPa हो)।
के ZR-1201 मास्क प्रतिरोध परीक्षकको परीक्षण समय कम सेट गर्न सकिन्छ?
मानकले परीक्षण अवधि निर्दिष्ट गर्दैन। यो उपकरण प्रवाह स्थिर भएपछि गरिनेछ (लगभग १ seconds सेकेन्ड भित्र)। यो सिफारिश गरिन्छ कि मापन अवधि १ seconds सेकेन्ड भन्दा लामो हुनु पर्छ।
ZR-1201 मास्क प्रतिरोध परीक्षकको विचलनसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
तुलनाको लागि, यो मानक नमूनाहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ (जस्तै प्राधिकरण संगठन द्वारा नमूनाहरू परीक्षण गरिएको)। तुलना गर्ने क्रममा, उही नमूना उही ठाउँमा परिक्षण गरिनुपर्दछ र नमूनाहरू समान तरिकाले प्रिरेट गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंलाई शंका लाग्दछ कि उपकरणमा त्रुटिहरू छन् भने, यो क्यालिब्रेसनका लागि योग्य मापन एजेन्सीमा जान सिफारिस गरिन्छ।